မချယ်ရီထက်ပုဒ်မ၅၀၅ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရ – Maythadin
May Thadin | September 26, 2021 | News | No Comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သက်တော်စောင့် ဒုရဲအုပ် မချယ်ရီထက်အား
စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ ၎င်း၏ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းမှတစ်ဆင့် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း Myanmar Police CDM ၏ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။.
ဖော်ပြချက်တွင် မချယ်ရီထက်အား ဖေဖော်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့ စစ်ကောင်စီမှ ပြည်သူအာဏာအားသိမ်းယူလိုက်ချိန်တွင် အတိုင်ပင်ခံ၏ သက်တော်စောင့် မချယ်ရီထက်အား
နေပြည်တော်ရှိ ၎င်း၏လိုင်းခန်းအကျယ်ချုပ်ထိန်းသိမ်း၍ သတင်းဖျောက်ထားခဲ့ခါ ယခုလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီမှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား၍ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုဒ်မ ၅၀၅-(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆွဲဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
စစ်ကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍ သက်တော်စောင့် ဒုရဲအုပ် မချယ်ရီထက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ Myanmar Police CDM ၏ဖော်ပြမှုအရ အထက်ပါအတိုင်း တရားစွဲဆိုခံထားရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သက္ေတာ္ေစာင့္ ဒုရဲအုပ္ မခ်ယ္ရီထက္အား
စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎၏ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းမွတစ္ဆင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Police CDM ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။.
ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ မခ်ယ္ရီထက္အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁)ရက္ေန႕ စစ္ေကာင္စီမွ ျပည္သူအာဏာအားသိမ္းယူလိုက္ခ်ိန္တြင္ အတိုင္ပင္ခံ၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ မခ်ယ္ရီထက္အား
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎၏လိုင္းခန္းအက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္း၍ သတင္းေဖ်ာက္ထားခဲ့ခါ ယခုလ (၂၁)ရက္ေန႕တြင္ စစ္ေကာင္စီမွဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား၍ (၂၃)ရက္ေန႕တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅-(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဆြဲဆိုထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
စစ္ေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစ၍ သက္ေတာ္ေစာင့္ ဒုရဲအုပ္ မခ်ယ္ရီထက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ Myanmar Police CDM ၏ေဖာ္ျပမႈအရ အထက္ပါအတိုင္း တရားစြဲဆိုခံထားရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
သိန်း ၁၀၀ ပေးတောင် ဆံပင်မရောင်းတဲ့ မိုးကုတ်ကဆရာမလေး ဆံပင်ဖြတ်ပြီးလှူပြီ
ကဲ အားလုံးချစ်တဲ့ ​ကောင်းထက်​ဇော် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျှက်ရှိပါကြောင်းသိရ